Maitiro ekudhawunirodha ClasseViva paPC, Emulator.online ▷ 🥇
Sezvo chikoro chemwana wako chakasarudza kutora rekodhi yemagetsi ClasseVivaIwe wagara wakashandisa yakakosha kunyorera mafoni uye mapiritsi kuverenga kuverenga kwevadzidzisi, kutarisa mamaki emwana wako uye kupembedza kusavapo kwavo. Munguva pfupi yapfuura, zvakadaro, iwe waona kuti zvinokwanisika kuita zvese izvi kubva komputa yako pachako. Naizvozvo, iwe waedza kuwana sevhisi kubva komputa yako, asi kuyedza kwako kwese kurodha ClasseViva hakuna kuburitsa zvaunoda.
Saka ichokwadi? Saka rega ndikutaurire kuti wauya kunzvimbo chaiyo panguva yakakodzera. Mundima dzinotevera dzegwara rino, muchokwadi, ini ndichakutsanangurira maitiro ekurodha ClasseViva paPC kukupa iwe ruzivo rwese rwaunoda kuti ubudirire. Chekutanga pane zvese, iwe unowana yakatsanangurwa nzira yekuwana iyo ClasseViva zvemagetsi rekodhi kuburikidza nebrowser, inova chirongwa chaunowanzo shandisa kutsvaga paInternet. Pazasi, ini zvakare ndinokupa iwe yakadzama mirairo kurodha pasi kune yako PC. ClasseViva Famiglia mi ClasseViva vadzidzi, kunyorera mafoni emafoni anotendera vabereki nevadzidzi kuwana rekodhi yemagetsi.
Kana iwe uchinetseka kuti izvi zvinogoneka sei, ndinogona kukuudza ipapo ipapo: ingoshandisa yakakosha software iyo inokutendera iwe kushandisa zvinoshandiswa nemitambo yakagadzirirwa Android paWindows uye macOS. Kana zvirizvo chaizvo zvaunoda uye uchida kuziva zvakawanda, ngatiregei kuenda kumberi uye tione mafambiro. Kuverenga kunofadza uye rombo rakanaka mune zvese!
Maitiro ekuwana ClasseViva kuburikidza nebrowser
Maitiro ekudhawunirodha ClasseViva Spaggiari application paPC
Maitiro ekudhawunirodha ClasseViva Famiglia paPC
Maitiro ekudhawunirodha ClasseViva Studenti paPC
Usati wasvika pamwoyo wedzidziso iyi uye nekuitsanangura zvakadzama maitiro ekurodha ClasseViva paPC, rega ndikupei ruzivo rwekutanga rwekuti ungawana sei chikuva chiri mubvunzo.
ClasseViva ndeyemagetsi chikoro rekodhi (chakagadziriswa neSpaggiari Boka) yakatsaurirwa vadzidzisi, mhuri uye vadzidzi. Komputa, sevhisi iri mubvunzo inogona kushandiswa pasina kudhawunirodha chero software, nekuti inowanikwa zvakananga kubva kubhurawuza: zvakakwana kuti ubatanidze kune inoenderana webhusaiti webhusaiti uye uwane ne data rakapihwa nechikoro kana chikoro chasarudza kutora rejista mubvunzo.
Sezvo iwe uchinyatso kuziva, ClasseViva inowanikwawo muchimiro che kunyorera kwema smartphones nemapiritsi. Kuenda mune rumwe ruzivo, ClasseViva Famiglia (Android / iPhone / iPad) iko kunyorera kwakakumikidzwa kuvabereki kunovatendera kuti vatsanangure kusavapo, kuona zvinyorwa, kubvunzurudzwa kwemabhuku nevadzidzisi, nezvimwe. ClasseViva vadzidzi (Android / iPhone / iPad) chishandiso icho chinobvumidza vadzidzi kuti vashandise masevhisi ekunyoresa emagetsi, senge mukana wekurodha pasi zvinhu zvekudzidzisa uye, kune vadzidzi vezera repamutemo, vanopembedza kusavapo kwavo, nepo ClasseViva vadzidzisi (Android / iPhone / iPad) ndicho chishandiso icho chinobvumidza vadzidzisi kutora bvunzo, kunyora zvinyorwa zvekuranga, kuwedzera mamaki uye zvimwe zvakawanda.
Iyo yeWebhu vhezheni yeClasseViva uye mashandisiro andichangobva kuratidza ane angangoita akafanana graphic dhizaini uye zvakafanana mabasa. Izvo zvakati, kana chero chikonzero iwe uchifanira kutora ClasseViva maapps emafoni efoni uye mapiritsi zvakananga kubva paPC yako, unogona kuvimba ne Android emulator, iri software inokutendera kuti utore uye ushandise ese maficha akagadzirirwa mafoni uye mapiritsi akashongedzerwa neyegirini irobhoti inoshanda system paWindows uye macOS. Zvese zviri pachena kusvika parizvino? Zvakanaka saka ngatiitei.
Kuti uwane iyo ClasseViva rekodhi yemagetsi kubva pakombuta, kungave semudzidzisi kana semubereki kana mudzidzi, tanga bhurawuza raunowanzoshandisa kuongorora iyo Internet (ex. Chrome, Borde, Firefox, safari nezvimwewo) uye zvakabatana newebhusaiti yepamutemo yeClasseViva.
Iye zvino, pinda magwaro ako ekupinda muminda Yako kodhi / email / chitupa mi pasiwedhi uye tinya pamusoro bhatani Kusimbiswa, kuti upinde mukati uye upinde murejista yemagetsi.
Kana, kune rumwe rutivi, usati wapinda muClasseViva kekutanga, tora iyoenamel kuti chikoro chakutuma wobva wadzvanya yekuwana chinongedzo zvirimo. Mune peji idzva rakavhurwa, gadzira password inozoshandiswa kuwana rekodhi yemagetsi, ichipinda mukati meminda Isa password mi Tsigira pasiwedhi (anosvika mabhii masere, kusanganisira rinenge bhii bhii repazasi, tsamba imwe yepamusoro, nhamba imwe, uye hunhu hunokosha), isa mucherechedzo padyo nesarudzo. Ini handisi robhoti uye tinya bhatani Kusimbiswa.
Panguva ino, nyora izvo username inoratidzwa pachiratidziri, tinya chinhu Kuwana kune rejista yemagetsi ClasseViva uye, muchiratidziro chitsva chinoonekwa, pinda iyo data yawakangogadzira muminda Yako kodhi / email / chitupa mi pasiwedhi. Pakupedzisira, pinza bhatani Kusimbiswa, kupinda mukati uye kushandisa zvemagetsi kunyoresa masevhisi.
Kana wafunga dhawunirodha ClasseViva Spaggiari kunyorera paPC yakoSezvakataurwa mumitsara yekuvhura yegwara rino, iwe uchafanirwa kuvimba neiyo Android emulator. Ini pachezvangu ndinokurudzira iwe BlueStackssezvo iri pakati peyakakurumbira uye pakati pevaya vane kugona kwakanyanya (kunyanya kumitambo, inoda zvimwe zviwanikwa). Tsvaga zvese zvakatsanangurwa zvakadzama pazasi.
kubudikidza download ClasseViva Famiglia paPCKutanga, batanidza kune BlueStacks yepamutemo webhusaiti uye tinya bhatani Download BlueStacks [versione]kumusoro kurudyi kutanga kurodha pasi software iri mubvunzo.
Rizere kurodha pasi, kana iwe uine Windows yeWindows, tinya kaviri pafaira BlueStacksInstaller_ [shanduro] .exe, cindezela bhatani hongu, kubvumira chirongwa kuita shanduko pakombuta yako, uye sarudza sarudzo Isa izvozvi, kutanga kuisirwa.
Ehe, kune rumwe rutivi, ine Mac, vhura iyo .netg package kuwana zvakapetwa kaviri paBlueStacks icon mukati mayo, pinda mabhatani Vhura mi Isa izvozvi, pinda pasiwedhi ye account yako yemushandisi mune macOS uye tinya pakabaya Kuiswa wizard, kutanga kuisirwa.
Muzviitiko zvese izvi, mirira iyo yekufambira mberi bhaa kuti isvike 100% (zvinogona kutora maminetsi mashoma) kuti chirongwa chiise uye chitange otomatiki. Panguva ino, tinya bhatani Zvinotanga uye, pachiratidziri kusvika Google Playdzvanya mabhatani Registrarse mi Log in, kuti upinde neakaundi yako yeGoogle: wobva waisa iyo data muminda Email kero kana nhamba yefoni mi Isa password yako uye tinya pamusoro bhatani Pamberi.
Iye zvino, pane huru BlueStacks skrini, tangisa iyo Tamba chitoro nekudzvanya icon yayo (kana iwe uri kushandisa Mac, tanga wasarudza iyo tabo Zvandinoshandisa), mhando "ClasseViva Famiglia" mumunda Tsvaga maapplication nemitambo iri kumusoro uye tinya batani Pinda pane keyboard kuti utarise mitsva yekutsvaga. Wobva watsvaga iyo application iri mubvunzo (inofanirwa kuve yekutanga mhedzisiro), tinya inoenderana bhatani Isa pane pc uye mirira kuti kurodha pasi nekumisikidza kupedze.
Panguva ino, tinya bhatani Vhura kana inClasseViva Famiglia icon zvaunowana pachiratidziri Mitambo yangu (pane Mac iri Zvandinoshandisa), Isa zvinyorwa zvako zvekupinda muminda Username / email mi pasiwedhi uye tinya bhatani Access, kuwana rekodhi yemagetsi uye kushandisa masevhisi akapihwa kuvabereki vevadzidzi.
Maitiro e download ClasseViva Studenti paPC Izvo zvakada kufanana nezvandakaratidza mumitsara yapfuura yakatsaurwa kurodha pasi ClasseViva Famiglia kukombuta. Zvekare, zvese zvaunofanirwa kuita kurodha pasi BlueStacks, pinda neakaundi yako yeGoogle, uye tanga iyo Tamba chitoro.
Paunenge wapedza, Type "ClasseViva Studenti" mumunda Tsvaga maapplication nemitambo iri kumusoro uye tinya batani Pinda keyboard. Wobva waziva ClasseViva vadzidzi mune zvawanikwa (inofanirwa kuve yekutanga mhedzisiro), tinya bhatani Isa pane pc uye mushure mekurodha pasi kwapera, tinya pane sarudzo Vhura, kutanga iyo application iri mubvunzo.
On the screen Access, baya data rakabatana neakaunti yako muminda Username / email mi pasiwedhi uye tinya panzira yacho Access, kuti uwane ClasseViva Studenti. Chokwadi chiri nyore?